Ithegi: I-Weebly kunye neLightspeed | Martech Zone
Ithegi: I-Weebly kunye neLightspeed
NgoLwesithathu, nge-9 kaJanuwari 2019 NgoLwesithathu, nge-9 kaJanuwari 2019 Douglas Karr
Ubungqina boluntu bubalulekile xa abathengi besenza isigqibo sokuthenga kwindawo yakho ye-ecommerce. Abaveleli bafuna ukwazi ukuba indawo yakho ithembekile kwaye abanye abantu bathenga kuwe. Amaxesha amaninzi, indawo ye-ecommerce ihleli ndawonye kwaye uphononongo ludala kwaye ludala… luchaphazela izigqibo zomthengi omtsha. Inqaku elinye onokuthi ulongeze, ngokoqobo, kwimizuzu embalwa yiPop yokuThengisa. Le popup esezantsi ekhohlo ekuxelela yona